camshaft gear | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Fanaraha-maso ny fihenam-bidy
Fampidiran-drivotra fananganana tohodran-drivotra miaraka amin'ny fitaovana fanodinana IGBT
Tanjona: Fanafanana ny fitaovan'ny camshaft misy habe 1.630 bore hampihena ny vatan'ny vy misy savaivony 1.632 ″. Ny mari-pana 5000F dia takiana mba hanitarana ny fitaovana 0.002 ″ mba hiparitaka eo ambonin'ny hazo. Ny famokarana dia atao ankehitriny amin'ny taha 15-20 gears isaky ny 24 ora amin'ny alàlan'ny fanafanana ny fitaovana
amin'ny takelaka mafana. Ny fiakaran'ny mari-pamantarana mafana dia maharitra mandritra ny minitra 45.
Ny mpanjifa dia te-hijery ireo safidy azo atao amin'ny resaka ora fanafanana sy ny haben'ny masinina.
Fitaovana: Gear Camshaft vy mirefy 7 ″ ny savaivony, 1 ″ matevina, miaraka amin'ny haben'ny 1.630 ″.
Fampiharana: coil helika telo (3) tokana miavaka miaraka amin'ireo famatsiana herinaratra fampidiran-tsakafo DAWEI isan-karazany no nampiasaina hahatratrarana ireto valiny manaraka ireto:
- 5000F dia tratra tao anatin'ny telo (3) minitra raha nampiasa ny famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mahery DW-HF 5, 5 kW.
- 5000F dia tratra tao anatin'ny dimy (5), valo (8), ary folo (10) minitra tamin'ny fampiasana ny famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mafy an'ny DW-HF-3, 5 kW.
- Na ny fanamainana aza dia voamarina vokatry ny coil induction helical telo (3) miavaka.
Fitaovana: DW-HF-35 sy DW-HF-55 kW dia mamoaka famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mafy, isan'izany ny tobin'ny hafanana lavitra ary ny coil helika telo tsy manam-paharoa vita amin'ny fantsona varahina 3/16 and ary manana habe 4.4 XNUMX ao anatiny.
Sokajy Technologies Tags camshaft gear, fanasan-damba fiara, fanatobiana famokarana fitaovana fanamafisam-peo, induction heating, Fitaovana enti-mody, Afangaro ny fiara mifamatotra